China Outdoor Trekking Multi-function Tactical Oxford Backpack 50L Manufacturer and Supplier |Lousun
N'èzí Trekking Multi-ọrụ Tactical Oxford Backpack 50L
Akpa akpa oxford nwere ọtụtụ ọrụ, nke ụlọ ọrụ dị arọ 600D oxford wuru, ugboro 2 * mkpuchi PVC, mgbochi esemokwu, na-adịgide adịgide.Na-ebu eriri, ubu eriri na azụ na straddle ubu eriri, nwere ike ime 1pc dropshipping ọrụ, 1.3KGS/PC.
Ihe No.LSB 1001
Nha:12L * 7.5W * 21.5H inch
Oge Mbuga ozi:ODM: N'ime ụbọchị 7 nwere ike izipu mgbe akwụchara ụgwọ zuru oke.
1. Akpụkpọ anụ dị arọ ---arụ ọrụ dị arọ nke ụlọ ọrụ 600D oxford PVC * rụrụ 2 ugboro, na yarn ọkọlọtọ na njupụta ndị ọzọ, mgbochi mgbochi na mgbochi ịkpụ, enweghị mmiri, na-adịgide adịgide.
2. Ezi ụkpụrụ --- ntụsara ahụ dị mma ma na-eku ume azụ na ubu S udi eriri, ike decompression seismic imewe na ntupu / sponge / ụfụfụ.
3. Na-ebu eriri --- Otu ubu, ma ọ bụ ubu abụọ nwere ike iburu, nhazi dị arọ, nnukwu ikike, enweghị nrụgide iji.
Ngwa ngwa ---Mgbanaka resin dị n'akụkụ nwere ike idowe ọtụtụ ihe, dịka kompas, n'elu akpa azu a nwere eriri naịlọn kpara akpa nke nwere ike ịdogide ebe dị mfe.
* Nhazi arụmọrụ --- N'akụkụ, e nwere otu nke na-ebu eriri w.cross stitching na nsọtụ abụọ, na n'azụ, e nwere abụọ dị mma na-edozi eriri ubu, na-akwa abụọ na triangle na-akwa na ma ubu eriri na nsọtụ, nakwa otu ikepụ otu ubu eriri.N'èzí enwere ọtụtụ akpa ndị nwere ike ịkwakọ mkpanaka, karama mmiri, akwụkwọ, I-pad na wdg. ọtụtụ ihe dị mkpa kwa ụbọchị.
* Ngwunye dị n'èzí, akpa ihe eji eme ihe n'èzí, akpa akpara nke ọma n'èzí.
1. Kwa afọ, enwere ebuka azu paaki na ụlọ nkwakọba ihe, agba ise kpam kpam, dịka tan, ojii, ọzara ebipụta, ACU ebi, igwefoto ọhịa.
2. ODM na OEM ma workable, ma ọ bụrụ na i nwere imewe ma ọ bụ backpacks ịzụlite, anyị nwere ike ime ahaziri logos / patches wdg, anyị pụrụ iche otu ga-egosi gị anya ọrụ na uru.
3. Nkọwa ọ bụla, dịka eriri akwa akwa, ọ dị larịị, kwụ ọtọ na ọbụna, debe ọkọlọtọ ka ịdụ akpa akpa ahụ dum, ọ dị nro dị ka onyinye ị ga-enweta mgbe ị na-abanye n'aka.
4. Ogo, dabere na AQL2.5-4.0, na ụkpụrụ nnwale mmepụta siri ike, iji nọgide na-adị mma maka akpa ọ bụla a na-ebuga na ahịa mba ofesi, nke nwetara nnabata ọtụtụ ndị ahịa ochie.
Enwere ike itinye ya n'ọrụ njem n'èzí, ịgba ugwu, ọzụzụ ọgụ n'ezie, njem, njem, ụzọ aghụghọ na wdg.Ọ nwere ma mfe nke iji, na ọtụtụ nkasi obi na-ebu iji nyere ndị mmadụ aka inyocha ụwa na ọdịdị nke mmasị.
Nke gara aga: Ịkụ azụ ABS/PC/ Alloy ike mgbochi mmiri mkpanaka akpa 35 inch ogologo
Osote: OEM ịchụ nta / agbapụ waterproof akpa egbe 47 inch ogologo
Akpa Hikking Adventure Mountaining Akpa
Akpa Amụma agha
nnukwu azu paaki n'èzí
mpụta agha kenkwucha rucksack
Akpa akpu osisi n'èzí
akpa njem n'èzí nwere ọtụtụ ọrụ tactical oxford azu paaki
Akpa akpa OEM & ODM dị fechaa n'èzí...
Ngwugwu ụbọchị bọọlụ basketball n'èzí…
Akpa Oxford Day ngwugwu akpa akpa Gear OEM ...
Mpụga Tactical Nnukwu ikike 100L Oxford Water...